समुराई र निन्जा अनुभव! जापानमा Best उत्तम सिफारिश गरिएका ठाउँहरू - Best of Japan
समुराई संग्रहालयमा समुराई कवच, शिन्जुकु जापान = शटरस्टक
हालसालै समुराई र निन्जाको अनुभव लिन सक्ने विभिन्न सुविधाहरूले जापानमा आउने विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा लोकप्रियता लिएका छन्। जापानमा समुराई युगको स्टुडियो शुटि drama्ग नाटक, इत्यादिले समुराईको दैनिक प्रदर्शन गर्दछ। इगा र कोका जस्ता स्थानहरूमा जहाँ धेरै निन्जा रहेको थियो, निन्जाले वास्तवमा प्रयोग गर्ने हतियारहरू प्रदर्शन गरिएको छ र निन्जा कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएको छ। यस पृष्ठमा, म सुविधाहरू परिचय गर्दछु जुन मैले सिफारिस गरेको छु।
जापानमा समुराई प्रशिक्षण = शटरस्टक
TOEI क्योटो स्टुडियो पार्क (क्योटो)
समुराई केम्बु थिएटर क्योटो (क्योटो)
समुराई संग्रहालय (टोकियो)
निक्को एडोमुरा = ईडो वन्डरल्यान्ड (निक्को, तोचिगी प्रिफेक्चर)
Iga-ryu निन्जा संग्रहालय (Iga शहर, माई प्रान्त)
कोका निन्जा हाउस (कोका शहर, शिगा प्रान्त)
निन्जा डोजो र स्टोर (क्योटो)
क्योटको टोइइ चलचित्र गाउँ, उजुमासा। प्रदर्शन जसले सामरियाको बिचमा तरवार र शटरस्टकको बीचमा द्वन्द्व देखाउँदछ।
Toei जापान मा एक प्रमुख फिल्म निर्माण कम्पनी हो। यस चलचित्र कम्पनीले धेरै चलचित्रहरू निर्माण गरेको छ जसमा समुराई र निन्जा देखा पर्दैछन्। स्टुडियोको एक हिस्सा सार्वजनिक गरिएको छ र एक थिम पार्क भएको छ। त्यो Toei क्योटो स्टूडियो पार्क हो।
तोई क्योटो स्टुडियो पार्कको लगभग ,53,000 XNUMX,००० वर्ग मीटरको शूटिंग सेट छ, जुन धेरै सय वर्ष पहिले जापानको सडकहरू पुन: उत्पादन गर्‍यो। तपाईं यस शहर मा एक पैदल लिन सक्नुहुन्छ। यो संसार हो जहाँ समुराई र निन्जा एक पटक बाँचिरहेका थिए। यस शहरमा, सकुरामा लुगा लगाएका कलाकारहरूले आफ्ना प्रदर्शनहरू प्रदर्शन गर्दछन्। तपाईं पनि यस शो मा भाग लिन सक्नुहुन्छ।
तोई क्योटो स्टुडियो पार्कमा, तपाईं समुराई र गेशा जस्तो लुगाहरू लगाउन सक्नुहुनेछ फिल्मको निर्माणको लागि। यो सेवा प्रयोग गर्नको लागि आरक्षण आवश्यक छ। तपाईं समुराई हुन सक्नुहुन्छ र तपाईं पुरानो जापानी सहरमा आफ्नो मुटुको सामग्रीमा टहल्न सक्नुहुन्छ।
Toei क्योटो स्टूडियो पार्क एक पारम्परिक थीम पार्क हो जुन एक फिल्म निर्माण कम्पनी द्वारा १ 1975 XNUMX मा स्थापित भयो। म पनि धेरै चोटि आफ्ना छोराहरूसँग छु। मलाई लाग्छ कि यो थिम पार्क भ्रमण गर्न लायक छ। तपाईंले Toei क्योटो स्टूडियो पार्क मा सबै माध्यम बाट सामुराई अनुभव प्रयास गर्नु पर्छ।
टोई क्योटो स्टुडियो पार्क क्योटोमा अरशिअमामा नजिक अवस्थित छ। यो उज्मामा JR स्टेशन बाट foot मिनेट पैदल छ।
>> तोई क्योटो स्टुडियो पार्क को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
समुराई केम्बु थियटर एक पर्यटक सुविधा हो जुन विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई जापानी परम्परागत "केम्बु" संस्कृति प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। "" जापानी तरवारहरूको साथ परम्परागत नृत्य हो। यो भनिन्छ कि समुराईले आत्मा केम्बू प्रशिक्षणको लागि खेलेको थियो। समुराई केम्बु थिएटर पेशेवरको समूहको केम्बुद्वारा संचालित हो।
समुराई केम्बु थिएटर क्योटोको सबवे "सञ्ज्यो केइहान" स्टेशनबाट minutes मिनेट पैदल अवस्थित छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँ उपलब्ध छन्। ती मध्ये, पर्यटकहरु बीच सब भन्दा लोकप्रिय कोर्स (१ घण्टा, २ घण्टा) हो जहाँ सहभागीहरूले वास्तवमा जापानी तरवारहरु (तीखो होइन) प्रयोग गरी आधारभूत केम्बू सिक्छन्। सहभागीहरूले समुराई पोशाक लगाउँछन् र अन्तमा तस्विरहरू लिन्छन्। यो प्रोग्रामलाई अवलोकन गर्नका लागि यो ठीक छ। सबै कार्यक्रमहरू अंग्रेजीमा छन्।
समुराई केम्बु थिएटर विदेशबाट आएका पर्यटकहरू बीच धेरै लोकप्रिय छ त्यसैले म तपाईंलाई चाँडै बुक गर्न सिफारिस गर्दछु।
>> समुराई केम्बु थिएटरको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
धेरै सामुराई पोशाकहरु Shinjuku मा सामुराई संग्रहालय भित्र प्रदर्शनी हल मा देखाइन्छ = शटरस्टक
समुराई संग्रहालय टोकियोमा JR Shinjuku स्टेशन देखि minutes मिनेट पैदल अवस्थित छ। यो संग्रहालय समुराईको भावनालाई व्यापक रूपमा प्रस्तुत गर्न संचालित हो।
प्रवेशद्वारबाट प्रवेश गर्दा समुराईले लगाएको हतियार (योरोइ) र हेलमेट (काबुटो) प्रदर्शन हुन्छ। जब तपाईं पहिलो तल्लाबाट दोस्रो तलामा जानुहुन्छ, समुराईले प्रयोग गरेको जापानी तरवारहरू र पुरानो बन्दुकहरू आदि विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। जापानको एकीकरणमा सफल भएका तीन समुराई सेनापतिहरू (नोबनागा ओडीए, हिडयोशी तोयोटोमी, इयासु टोकगावा) का हेलमेट र आर्मरको प्रतिकृतिहरू पनि छन्। १२ औं शताब्दीदेखि लगभग 700०० वर्षसम्म जापानी इतिहासमा समुराईले खेलेको भूमिका बुझ्न यो सजीलो छ।
यस संग्रहालयको सबैभन्दा लोकप्रिय चीज कुना हो जहाँ आगन्तुकहरूले वास्तवमा कवचको साथ फोटो लिन सक्दछन्। यदि तपाईं अग्रिम बुकिंग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं वास्तविक समुराईको रूपमा समान शैलीमा प्रामाणिक आर्मर र फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ।
समुराई संग्रहालयमा, जापानी तरवारको प्रयोग गरेर लड्ने प्रदर्शन पनि देखाइदैछ। सबै प्रदर्शनहरू जापानी भाषामा मात्र नभई अंग्रेजी र चिनियाँमा पनि लेखिएका छन्।
>> समुराई संग्रहालय को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
समुराइडे प्रोफेशनर्स द्वारा आयोजित शुरुवात गर्नेहरूको लागि व्याख्यान कोर्स हो जसले जापानी कलाकारहरूलाई जापानी तरवारहरू प्रयोग गर्न निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्। यो टोकियो सबवे "Shinjuku Gyoen" स्टेशन बाट foot मिनेट को पैदल मा स्थित स्टूडियो मा आयोजित छ।
सामुराइमा, तपाईं पहिलो सामुराईको आधारभूत शिष्टाचार र कसरी समुराईको किमोनो लगाउने सिक्नुहोस्। त्यसो भए, तपाईं कसरी जापानी तरवारहरू प्रयोग गर्ने र वास्तविक प्रदर्शन खेल्ने सिक्नुहुन्छ। अन्तत: तपाईं एक स्मारक फोटो लिनुहुन्छ। कोर्सको लागि प्रयोग गरिएको जापानी तरवार एल्युमिनियमबाट बनेको छ र अभ्यासमा यसलाई काट्न सकिदैन।
SAMURAI को कोर्सले करीव 70० मिनेट लिन्छ। यो कोर्स पनि धेरै लोकप्रिय छ। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि चाँडै बुक गर्नुहोस्।
>> SAMURAI’E को विवरणहरूका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
निन्जास इडोमुरा, जापान मा एक प्रदर्शन पछि। इडोमुरा जापानको सबैभन्दा मनपर्ने थिम पार्क हो जसमा निन्जास र समुराई छन्। बच्चाहरूको लागि एक ठूलो आश्चर्य = शटरस्टक
निक्को इडोमुरा (एडो वन्डरल्यान्ड) मा गीशा परेड ईडो पीरियड १1603०1868-१-XNUMX during during को समयमा जापानको शहर जीवन पुनःनिर्माण गर्ने एक ईतिहास थिम पार्क हो जुन शटरस्टक
निक्को एडोमुरा (एडो वन्डरल्यान्ड) ईतिहास काल १ 1603०1868-१-XNUMX during को अवधिमा जापानको शहर जीवन पुनः निर्माण गर्ने एक ईतिहास थिम पार्क हो।
निक्को एडोमुरा टोकियोबाट १ 140० किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। कुल साइट क्षेत्र .49.5 .XNUMX ..XNUMX हेक्टर छ। निक्को एडोमुरामा, तपाईं क्योटोको टोई क्योटो स्टुडियो पार्क जस्ता पुरानो जापानी शहरको माध्यमबाट घुमाउन सक्नुहुन्छ। पुरुष समुराई, शासक इत्यादिको रूपमा प्रतिरूपण गर्न सक्दछन्। महिलालाई समुराईकी छोरी, राजकुमारी, तरवार महिला र अन्य जस्तो लगाउन सकिन्छ। थप रूपमा, तपाइँ समुराईको आधारभूत व्यवहार जान्नको लागि एक व्याख्यान बैठकमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि निन्जा द्वारा प्रदर्शन आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यस थिम पार्क को बारे मा १ minutes मिनेट को बस द्वारा प्रसिद्ध तातो वसन्त रिसोर्ट बाट Kinugawa Onsen भनिन्छ। किनुगावा ओन्सेन रेलगाडीबाट लगभग २ घण्टाको दूरीमा छ (जेआर एक्सप्रेस वा तोबु रेल मार्ग एक्सप्रेस) मध्य टोकियोबाट।
निक्को एडोमुरामा, तपाईं टोकियोबाट एक दिन यात्रामा जान सक्नुहुन्छ। तर, त्यो केहि कठिन छ। त्यसकारण, म किनुगावा ओन्सेनमा बस्न सिफारिस गर्दछु, तातो स्प्रि .हरूको मजा लिदै र निक्को एडोमुरामा जान।
तपाईं प्रसिद्ध निक्को तोशोगु तीर्थ र पनि निक्को इडोमुरामा जान सक्नुहुन्छ। यो -० मिनेटको बस सवारी निक्को तोशोगु तीर्थबाट निक्को इडोमुरा सम्म छ।
>> निक्को एडोमुराको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
जापानको इगा सिटीस्थित निन्जा स्कूलमा निन्जा पोशाक र शिक्षण पढाउने एक जना व्यक्ति
Iga-ryu निन्जा संग्रहालय निन्जा को बारे मा सबै भन्दा राम्रो पर्यटक आकर्षण हो। इगा-रियु एक समय जापानको निन्जामा सबैभन्दा ठूलो विद्यालय थियो। यदि तपाईं Iga-ryu निन्जा संग्रहालय जानुहुन्छ, तपाईं घरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ जहाँ Iga-ryu निन्जाको परिवार एक पटक बस्थे। जब शत्रुहरूले आक्रमण गर्दा बचाउन यस घरसँग सुरक्षाहरू छन् जस्तै सेट जालहरू र नक्कली हलवेहरू।
जब तपाईं यस घरको तहखानेमा जानुहुन्छ, निन्जाले प्रयोग गर्ने असंख्य हतियारहरू प्रदर्शन हुन्छन्। यी धेरै प्रभावशाली छन्। यो घर छोडे पछि तपाईं निन्जा द्वारा प्रदर्शन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको अगाडि निन्जा खेलाडीहरूको लडाई आश्चर्यजनक रूपले भयानक छ।
Iga-ryu निन्जा संग्रहालय Iga-shi, Mie प्रान्त, केन्द्रीय हुनशु मा स्थित छ। यस संग्रहालय नजिकै इगाउनो क्यासल पनि हेर्न लायकको छ। यो किल्लालाई अड्डाहरू मध्ये एक मानिन्छ जब टोकुगावा शोगुनेटले ओसाकाको टोयोटोमी परिवारलाई आक्रमण गरे जुन शत्रुतापूर्ण छ। त्यसो भए Igaueno महलको ढु wall्गाको पर्खाल निकै ठूलो छ। टोयोटोमी परिवार नष्ट भए पछि यो किल्ला विस्तार गर्न आवश्यक पर्दैन, त्यसैले महल टावरहरू यस किल्लामा निर्माण गरिएको थिएन। तर १ 1935 XNUMX मा, काठको महल टावर स्थानीय राजनीतिज्ञको चन्दाद्वारा निर्माण गरिएको थियो। यस तरिकाले शक्ति प्राप्त गरेको इगाउनो क्यासल पनि अकिरा कुरोसावा निर्देशित फिल्म "कागेमुशा" को फिल्मांकनमा प्रयोग भयो।
यो संग्रहालयमा, यो १ घण्टा minutes० मिनेट लिन्छ कि सिधा बस द्वारा नागोया मेएत्त्सु बस सेन्टरबाट "युनो शहर स्टेशन" सम्म।
>> विवरणका लागि आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
कोका-र्यु निन्जाको स्कूल हो जुन एक पटक जापानको माथिको इगा-रियुको बराबरको शक्ति थियो। कोका-र्यू निन्जा एक स्थानमा ईगा-रियु निन्जाको नजिकै बस्थे। उनीहरू सहयोग गरे र शत्रुको बिरूद्ध लडे। यद्यपि तिनीहरू कहिलेकाँहि एक अर्कासँग लडे। त्यसो भए अब, Iga-ryu निन्जा बनाम कोका-रयू निन्जाको कार्टुनहरू र चलचित्रहरू समय-समयमा सिर्जना गरिन्छ।
कोका निन्जा हाउस कोका शहर, शिगा प्रान्त, केन्द्रीय होन्शुमा अवस्थित छ। यो इगा सिटी, माई प्रान्तको लगभग kilometers० किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ जहाँ इगा-रियु निन्जा बस्थे। JR Kusatsu लाइन मा Konan स्टेशन बाट टैक्सी बाट को बारे मा 30 मिनेट छ।
कोका निन्जा हाउस घर हो जहाँ कोका-रियु निन्जाको प्रमुख वंश थियो। तपाईं यो घर अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। इगा-र्यु निन्जा संग्रहालय जस्तै यो घर पनि विभिन्न खेलौनाहरू थिए जस्तै शत्रुहरू द्वारा आक्रमण गर्दा रक्षा गर्न पिटफल्स जडान गरिएको थियो। तिनीहरू सबै वास्तविक छन्।
कोका-र्यू निन्जासँग औषधीको प्रशस्त ज्ञान थियो। त्यसोभए यस घरमा तपाईं औषधी जडिबुटीको साथ चिया पिउन सक्नुहुन्छ जुन निन्जा पहिले पिउँदछन्। तपाईं पनि निन्जा द्वारा प्रयोग विभिन्न हतियारहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं निन्जाको रूपमा पनि लुगा लगाउन सक्नुहुनेछ वा शुरिकेन (चक्कु फाल्ने) फाल्न सक्नुहुन्छ। कृपया सबै अर्थहरूमा वास्तविक निन्जाको संसार अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
>> कोका निन्जा हाउसको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
यदि तपाईं इगा वा कोका जाने समय लिन सक्नुहुन्न भने, त्यहाँ पर्यटकीय आकर्षणहरू छन् जुन तपाईंले क्योटोको केन्द्रमा निन्जाको संसार सजिलै अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हो "निन्जा डोजो र स्टोर"।
निन्जा डोजो र स्टोअर Sh मिनेटको दूरीमा "शिजो" मेट्रो स्टेशन वा हान्कियु ट्रेनको "करसुमा" स्टेशनबाट हिड्दैछ।
निन्जा डोजो र स्टोरमा, पुरानो जापानी घरको आन्तरिक पुनः उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ निन्जाले प्रयोग गर्ने हतियारहरू छन्। र तपाइँ निन्जाको रूपमा शुरिकेन फेंक्न सक्नुहुन्छ। वयस्क र बच्चाहरू (aged बर्ष र माथिका) यस अनुभव कोर्समा भाग लिन सक्छन्।
जापान मा १ Best सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय! ईडो-टोकियो, समुराई, गिब्ली संग्रहालय ...